Xaabo Tuugo Matalaysay Jwxo-shiil oo Gawsaha Iska Guray! – Rasaasa News
Aug 12, 2009 Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Jaahuuro iyo Jaamadheer oo dagaal ku dhexmaray qol Jamiaca leedahay, Xaaba Tuugadii Matalaysay Jwxo-shiil ee Kulanka ku Lahayd Qol ku Yaal Jaaliya Jamiaca, ayaa dagaal xoog leh oo dhex maray isla iyaga oo qaar ka mid ah Isbitaalo u jiifaan dhaawacyo ka soo gaadhay dagaalka.
Wararka ka imanaya London, gaar ahaana Degmada Southall, ayaa waxay sheegayaan in maalintii Axada August 9, 2009, ay kulan gaar ah isugu yimaadeen xubno xaaba tuugo ah oo matalayey kooxda khaatumo-xun ee Jwxo-shiil. Kooxdan Khaatumo-xun oo xumaan iyo naxli kula dhex jirtay dadweynaha Somalida Ogadeeniya meel kasta oo ay aduunka ka joogaan, ka dib kolkii ay dadweynuhu u sheegeen in ay joojiyaan dunuubta ay halganka ka galayaan.
Dhibaatooyinka ay u gaysanayaan dadweynaha iyo xubnaha wada danaha ummada ayaan xisaab lahayn, inta la ogg yahay kooxdani waxay gashay dambiyo ka culculus kuwa ay ka gashay xukuumada Tigray dadweynaha Somalida Ogadeeniya sida;
1. Laynta xubnaha Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya,
2. Dagaal ka oogid dalka dariska aan nahay ee Somaliya
3. Layn cuqaal aan waxba galabsan iyo shacab
4. Ka hanti abuurasho qaaraanka halganka loogu talo galay.
5. Qabyaalada iyo iska horkeen beelaha Ogaden
Intaas iyo in ka badan oo dunuub ah ayey ka galeen dadweynaha iyo halganka Somalida Ogadeeniya, walina ma ayna ka quusan in khiyaamaan dadka aan la socon waxa ay yihiin.
Hadaba sheekada dagaalka ayaa waxay u dhacday sidan; kol alaale kolka ay kulmaan kooxda Jwxo-shiil waxa ugu horeeya ee ay isweydiiyaan ayaa wuxuu yahay maxaa dadweynaha laga soo uruuriyey, lacagaha la uruuriyo ayaa waxaa ku tasarufa kolba ruuxa ay gacantiisa gasho.
Waxaa kulanka gudoominayey Macalin Diirane oo aan isagu xaar seef ku kala goyn karin, ahna wadaad wayni ku bilaabay wajiyada badan iyo haweenay lagu sheegay in uu dhalay Ugaas ku xigeen reer Garigo,an ah. Waxaana su,aal ka mid ah su,aalaha u baahnaa in laga doodo kulanka, soo dhex dhigay wiil ka mid ah xaabo tuugada Norway oo magaciisa na loogu sheegay CAA, wuxuuna yidhi inta aan wax kale laga doodin aan isweydiino waxa lacag la hayo. Waxaa kula booday wiil baar leh oo aan faraxsanayn labadii maalmood ee uu kulanku socday isaga oo tabaya adeerki Jwxo-shiil, wuxuuna yidhi lacag umbaad ka hadashaane maad wax kale ka hadashaan, malahayga wuxuu jeclaa in la sheeg sheego xaalada uu ku sugan yahay Jwxo-shiil, wiilkan waxaa lagu magacaaba Faysal wuxuuna degan yahay Northamton.
waxaa la sheegay in isagana uu kula booday wiil kale, oo waa dhexdii ahayd Diirane ka keenay baadiyaha Garigo,an waa Bashiir Gurey oo ay dadku aad ugu yaqaaniin [Yarad], wuxuuna ku yidhi war adigu qaaraana ma bixiside naga aamus, Faysal baa ku yidhi waxaa laggugu soo koriyey qaaraankii aan bixin jiray oo waliba halkan laggugu keenay.
Intaasi kolkii ay kala gaadhay ayuu Bashiir dib u gurtay isaga oo xamili waayey wajiga Faysal, Faysal oo quruurad Kokakoola ah [cocola] gacanta ku haystay ayaa wajiga Bashir kaga garaacay, dhiig ayaana Indhihiisa iyo jidhkiisaba buux dhaafiyey.
Kolkiiba waxaa Faysal dhexda gashaday haween ay isku hayb yihiin oo Jwxo-shiilo ah [qabiil ku jabhad], iyaga oo aad moodaysay in ay dagaal u soo qaanshaarteen. Waxaa hadashay haweenay nalagu yidhi waa Shariifad iyada oo tidhi Naa ma dagaal baad meesha u timaadeen, Shariifada laftigeedii ayaa waxaa ku dhacay dharbaaxooyin. Waxayna gacanta qabsatay wiil la yidhi way dhashay oo goobta joogay iyada oo ku barooranaysa meeshan Jabhadina ma jirto Ogadeena ma ihiye waxa meesha I keenay waa khalad, Albaabka ayeyna orod kaga baxday.
Haweenkii iyo dhawr raga oo Jwxo-shiilo ah [qabiil ku jabhad], ayaa Albaabka xoog kaga soo baxay iyaga oo isu muujinaya in ay iska difaacayaan xaaba tuugo ay u arkayeen in ay ka badan yihiin, sidaas ayeyna iyaga oo ku geedamay wiilkii wax dilay, isaga oo uusan wax gaadhin ula soo baxsadeen.
Waxaa meesha joogay baa la yidhi dhawr haweena oo Jaama dheer ah [cuqdad ku jabhad] oo wiilka la dilay ee Bashiir Gurayna [Yarad] Eedo ugu quman, hase yeeshee waxay galeen oo kaliya in ay wiilka dhiga kaga bi,ibi,iyaan garba saarahooda. Bashiir Gurey waxaa la dhigay Isbitaalka weyn ee ku yaal degmada Iline ee waqooyiga London, halkaas oo lagu daaweynayey labo habeen, haatanse ay xaaladiisu roon tahay.
Macalin Diirane, Ina aw Xuseen iyo xun xunkii, halganka xagal haraatiyey oo aan xabad dhiiga laga heleen hadii Golxob la galiyo ayaa qolkii gawriirsaday, ayaa goor dambe uu waardiyihii u sheegay in ay dadkii kol hore tageen.
Kulan Micna Daro ah oo Kooxda Jwxo-shiil iyo Tuugta Daba Taagan Denver, Colorad ku Qabteen oo Lagu Kala Tagay